Anyi anaghi atu egwu Okorocha - ndị nkewa APC Imo - BBC News Ìgbò
Anyi anaghi atu egwu Okorocha - ndị nkewa APC Imo
17 Mee 2018
Media captionIhe ndị "Restoration Group" kwuru
Esemokwu onye ga abụ onye ga-anọchịte anya ndị APC Imo dịka gọvanọ na ntụlịaka nke 2019 ka na-adakwa.
Cheta na esemokwu a pụtara ihe n'ọnwa a, mgbe ha mere nhazi akpọrọ "Congress" a ga-eji họpụta onye ga-eji aha pati ahụ zọọ ọkwa gọvanọ.
Taa, otu n'ime ndị kewapụtara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC kpọrọ ndị ntaakụkọ n'isi ụlọọrụ ha maka ị kọwa echiche ha n'esomokwu nke di n'etiti ndị APC nke Imo steeti.N'ọnụ okwu TOE Ekechi bụ onụ na-ekwuchitere otu a, ha na-ebo gọvanọ Okorocha ebubo na o nupuru iwu ji patu ha isi ọtụtụ oge.
Onye ga-abụ Gọvanọ Imo Steet na 2019?
Okorocha ọ pụrụ imeli ọgọ ya Gọvanọ Imo steeti?
A nwụchiela mmadụ anọ maka izu akwụkwọ ntuliaka APC Ekechi kwuru na "Okorocha eriela ego niile dị n'Imo steeti, ndị Igbo na APC ajụla Okorocha n'Imo"Ọ gakwara n'ihu na-ebo Okorocha ndị omeiwu nke Imo steeti ebubo na ha anaghị arụ ọrụ ọbụla n'Imo steeti. Ekechi kwuru na ha nwere ihe onyonyo ruru 40 ga-abụ ihe ga-akwụ dịka ihe akaebe ha na ntuliaka "Congress" mere n'Imo steeti.
Nkenke aha onyonyo Ndị "Restoration Group" si na ha ga alaghachị Imo maka ntụlịaka
Ha kwukwara na Okorocha a na-abataghị ntuliaka emere n'Imo steeti maka na ọ na-agba mbọ ihụ na ọgọ ya nwoke were ọchịchị gọvanọ n'afọ 2019. Otu a na-ekwu kwa na Okorocha ekwughi eziokwu mgbe ọkpọro ndị mmadụ aha na ha esoghi na pati. BBC Igbo jụrụ onye ode akwụkwọ Gọvanọ Okorocha bụ Sam Onwuemeodo ihe ochere banyere n'ihe niile ndị "Restoration Group" na-ekwu mana ọ gwara anyị na-onweghị ihe ọ ga-ekwu banyere ha maka n'uche ya, ha emechala ihe ha nwereike ime. "Ike agwụla ha," Onwuemeodo gwara anyị.Ekechi na ndị otu ya kwuru na ha ga-abata Imo steeti maka ntụlịaka ga-eme echi bụ ụbọchi iri na asatọ nke ọnwa Mee.
Ụlọọgwụ Ọrthọpedic Enugwu dị ka ebe agbara ọsọ agha
Bọjetị 2018 ọ ga-enyere ndị ntoroọbịa aka?
Gọọmenti etiti ọ na-ahọrọ mkpebi ụlọikpe?
Edward Onoja bụzị osote Gọvanọ Kogi steeti
"Ụlọ m na 'shọp' m gbara ọkụ, ebe ka m ga-agbaje?'
'Itinye ego mgbazite n'ọkụ latrikị abụghị ihe kacha mkpa ugbua' - Sam Amadi